‘मलाइ जीवनभरीको सहारा दिन सक्छौं ?’
४ वर्ष पहिले
“किन बिहे गरेहुँला” भन्दै कमला घरको छतमा गएर गालामा हात राखे बस्छे । उसको आखाँभरी आँसु टलपलिन्छन् । ज्वरोले ग्रस्त उसलाई टाइफाइट भएको छ । अस्पातालबाट औषधि ल्याएर खान्छे, तर पनि निको हुँदैन् । उसका श्रीमान रातदिन तास खेलेर बस्छन्, तर कमलाका निम्ति एक गिलास पानी समेत तताएर दिन सक्तैनन् ।
जीवनभर साथ दिन्छु भनेर कसम खाने जीवनसाथीले यसरी बिरामी हुँदा पनि पानी समेत पिउन दिदैँनन् भन्ने कमलाले कल्पना समेत गरेकी थिइन् । उ आत्तिन्छे, रुन्छे, अनि आफ्नै भाग्यलाइ दोष दिन्छे । घरपारी डाँडामा हेर्छे, उसलाई हरियो डाँडा उजाड अनि उराठ लाग्छ । बाँच्नुको अर्थनै के रहेछ र भनेर टोलाउछे कमला । “साच्चै मन नै दुःखी भएपछि जगत खुसी कसलाइ पो लाग्दो हो, के यहि नै हो त मेरो जिन्दगी !”
कमला टोलाइरहेकी हुन्छे । पछाडिबाट एक्कासी आएको आवाजले तर्सिन्छे ।
“ के गरेर बसेकी हिड तला जाउँ तलाइ रोटी बनाइदिएको छु ।” कमला झसंग हुन्छे । खोइ कुन संसारमा हराएकी थिई उ ! उसका श्रीमान भुनभुनाउँदै तल झर्छन् । भुँइमा थचक्क बसेकी कमला उठेर हिड्न खोज्छे । आँखाभरी कालो बादल छाउँछ । घामको उज्यालो बातवरणमा पनि उसलाई चारैतिर अध्यारो लाग्छ । विस्तारे उठ्छे, तर ज्वरोको कारण उ आतिन्छे ।
कमला बल्ल तल्ल विस्तारै भ¥याङका खुटिकला ओर्लन्छे । सोच्छे “कताबाट उनको मनमा दया पलाएछ आज । भान्सामा पुग्छे । यताउता नजर डुलाउछे । तर, रोटि कतै देख्दिन् । अनि सोध्छे “खोइ त रोटी ?” यत्तिकैमा उनका श्रीमान झर्किन्छन् । “तलाइ के को रोटी , किन खानुप¥यो रोटी ? छतमा केटा हेरेर बसेकी होइनस्, त्यसैले तल बोलाएको । ”
कमला बेस्सरी रुन्छे । कति दिनदेखी भोकै थिइ उ । ज्वरोले गालेर नखाएको धेरै दिन भएको थियो । कोठामा गएर घोप्टो परेर रुन्छे । “ हे भगवान मैले के पाप गरेकी थिए र यसरी सजाए दिन्छौं ? कुन जुनीमा के पाप भएको थियो म बाट यस्तो जीवनसाथीसँग लगन गाठो बाधिदियौ । जसले जीवन संगीनी भनेर बिस्वास गर्ने कुरा त परै जावोस मलाई मान्छे नै होइन् भन्छ अनि मलाइ कतै दुख्दैन भन्छ ?”
कमला सारी लगाएर बाहिर निस्कन्छे ।
म माइत जान्छु
किन जानु प¥यो माइत ?
बा–आमालाई भेट्न ।
“कि अरुलाई नै भेट्न जाने सुर् छ ? जानु पर्दैन !”
श्रीमानसँग झगडा गर्दागर्दै कमला टेम्पो चढेर बसस्टपतिर लाग्छे । बस चढेर माइत हिड्छे । बस अगाडि बढ्छ । कमला मनभरी अनेकौ कुरा सोच्छे । फेरि साँझ त त्यहि घरमा फर्कनुछ । किन झगडा गरे हुँला ? फेरि साझँमा पिट्ने हुन की ? अ,हो ! कसरी जीवन बिताउने होला, यसरी रातदिन झगडा गरेर ! उनको मनमा हरेक पल म प्रति शंका उपशंकाले मात्र जन्म लिन्छन् । आखिर मलाइ किन विस्वास गर्दैनन् होला ? बसको सिटमा यस्तै तन्द्रामा डुबिरँदा कसैले बोलाएको सुनेर झसंग हुन्छे कमला ।
कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाइ ?
म जोरपाटी ।
तपाइ नी ?
म, बौद्धसम्म ।
जोरपाटी किन जान लाग्नु भयो ?
माइत जाँदैछु ।
तपाइको शुभ नाम भन्न मिल्ला ?
हजुर, कमला !
मेरो, रविन्द्र !
माइत जाँदैछु भन्ने जवाफले युवक अचम्म पर्छ । “ के तपाइको विवाह भइसक्यो र ?” तपाइ सानै पो देखिनुहुन्छ । किन सानै उमेरमा बिहे गर्नुभो ?” कमलालाई बोल्न मन थिएन । उ आफ्नै पीडामा घोत्लिइरहेकी थिइ । मनमनै सोचि “सायद यो गरिवीले पनि तिमी सानै छ्यौ भनिदिएको भए त्यतिबेला आज जिउदो लास सरह बाँच्नु पर्ने थिएन ।”
कमलालाई मौन देखेर युवक अप्ठ्रो मान्दै सोध्छ “गा¥हो त मान्नु भएको छैन नी ?”
युवक फेरि सोध्छ–माइतबाट कहिले फर्कनु हुन्छ नी ?
कमला–आजै फर्कन्छु ।
युवक–ए, म पनि आजै फर्कने हो । सँगै फर्कौ न हुँदैन ?
कमला–के कति कामले आउनु भएको थियो र आजै फर्कन लाग्नु भयो ?
युवक–म, एक बिस्कुट कम्पनीमा मार्केटिङ म्यानेजर छु । कम्पनीको कामले आएको थिए आजै फर्कन्छु ।
बसको स्टाफ चिच्याउँछ – ल, ल को को हुनुहुन्छ बौद्धमा झर्ने ? छिटो झर्नुस ।”
ल, त कमला जी जानोस है !
हुन्छ रविन्द्र जी, धन्यवाद !
कमला जी साँझ सँगै फर्कौन हैं ?
किन नहुने बरु तपाइलाई कहाँ भेट्न सकिएला ?
यहि गुम्बामा आउनुहोस न हुँदैन ?
हुन्छ ल त्यहि भेटौला !
बस अघि बढ्छ । जोरपाटी पुग्न धेरै बाँकी थिएन । तर कमला युवकका कुराहरु सम्झिएर टोलाइरहन्छे । कतिबेला जोरपाटी आइपुग्यो उसलाई पत्तै भएन । बसको स्टाफले “ल ल जोरपाटी आयो झर्नुस” भन्दा उ झसंग भई ।
बसबाट ओलिएर उ मेनरोड छोडेर माइती घर तिर लागि । एकैछिनमा माइतीको आँगनमा पुगेर बा आमालाई नमस्कार गर्छे । छोरीको अवस्था देखेर कमलाकी आमा अचम्म पर्छिन् । “के भयो छोरी तिमीलाई, किन यसरी दुब्लाएको ? आमाको आँखाभरी आँसु छचल्किन्छ । कमला आमालाई सम्झाउँछे “आमा नरुनोस् ज्वरो बिग्रीएर टाइफाइड भएको हो, तीन सय रुपैयाँको औषधि खाइसके , अब सन्चो हुन्छ ।”
आमा छोरीको भला कुसारी हुँदै थियो । कमलाका बाले सोधेँ – ज्वाइँले अझै पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ ?
अझै पनि त्यस्तै हो बा ! के गर्ने मैले त सकिन्, हारिसके उनी सँग अनि आफ्नै जिन्दगीसँग ।
अब त्यहाँ नजाउ छोरी, तिमीले सधै रुनुपर्छ भने किन जाने ?
होइन बा, म जान्छु । फेरि दुनियाको हाँसो, भर्खर बिहे भएको छ । कोशिष गर्छु जीवनमा अगाडि बढ्ने ।
कमलाको कुरा पनि ठिकै थियो । रातदिनको झगडाले उसलाई घर जाने मन त थिएन तर, पनि उ विवेकी देखिइ । बा–आमालाई पीडा दिन चाहिन् । समाजको चलन छोरीको जुनी लिएर जन्मेपछि पराइघर जानै पर्ने । पराइघर गैसकेकी चेली माइतीमा बस्दा समाजमा हाँसोको पात्र भइन्छ, बरु दुःख सुख गरेर घरमै दिन काट्छु भन्ने थियो कमलालाई ।
धेरैदिन पछि माइतीको घरमा आमाले पकाएको खाना, बा–आमाको साथमा बसेर दुुध –भात खाइ कमलाले । दूधभातसँगै आँखाबाट बगेका नुनिला आसु मिसिन्छ । उ सोच्छे– सायद बा– आमाले यति कलिलै उमेरमा मेरो बिहे नगरिदिएको भए, मलाइ पढाउनु भएको भए, मैले रातदिन रोएर बाच्नु पर्ने त थिएन !
खाना खाइसकेपछि बा–आमासँग केहि भलाकुसारी गरेर कमला फर्कने तरखरमा लाग्छे ।
आमा म फर्कन्छु
छोरी, भोली जाउली आज यतै बस् ।
हुँदैन आमा जानुपर्छ । उनी तास् खेलेर बस्छन् ।
हुन्छ त राम्रोसँग जाउँ
आमा बा सँग विदा भएर कमला बौद्ध पुगेर उत्रन्छे । नजिकैको होटलमा बसेको रविन्द्रले कमलालाई परैबाट देख्छ ।
रविन्द्र जी नमस्कार
नमस्कार कमला जी, आउनु भो ?
हजुर, म आए ।
चिया पिउनुहोस कमला जी !
हजुरको काम सकियो ? जाउ न त अब !
त्यसो भ जाउँ । फेरि पुग्न ढिलो हुन्छ । दुवैजना बस चढ्छन र एउटै सिटमा बस्छन् । कमला युवकलाई आफ्ना सबै अतित सुनाउछे । युवक अचम्म मान्दै सुन्छ । कुरा गर्दै जाँदा कमला अचानक भन्छे– “के तपाइ मलाइ सहारा दिनु सक्नुुहन्छ त ?”
युवक अकमकिदै भन्छ, “अफकोर्स, किन नदिनु !”
युवक आत्तिन्छ– होइन कमला जी, फेरि भेटेर कुरा गरौंला नी । जीनसाथी रोज्न किन यति हतार गर्नु हुँदैन । तपाइ त फेरि एकपटक यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिसक्नु भएको मान्छे । कमला रविन्द्रको कुरा सुनेर खुसी हुन्छे । तर, सोच्न सक्तिन् आवेशमा आएर के बोले भनेर । जव जीवनभर साथ दिन्छु भन्ने जीवनसाथीले त उसलाई साथ दिदैंन् । बसमा क्षणिक भेटमै प्रभावित हुने मान्छेले जीवन भर साथ देला त ?
कमला जिद्दी गर्छे । मलाई आजै तपाइको घरमा लिएर जानुस् न प्लीज ! उ रुन थाल्छे । मलाइ त्यो घरमा फर्कनु छैन् । त्यहाँ फेरि उही झगडा, उहि पिटाइ, उहि अविस्वास, उहि अमानविय व्यवहार । सब सम्झेर उ भक्कानिएर रुन्छे । बास्तवमा उ बिहान पनि लोग्नेसँग झगडा गरेर निस्कीएकी थिई । फेरि त्यहि फर्केर जान उसका खुट्टा कसरी लागुन् ।
जिन्दगी देखि हार खाइसकेकी कमला कयौंपटक नदीमा हाम फालेर आत्महत्याको असफल प्रयास नगरेकी होइन् । किन बाँच्नु ? कसको लागि बाँच्नु ? फेरि कसको मायामा बाँच्नु भन्दै जीवनसँग हार खाएकी कमलाले फेरि कसैको मायामा जिन्दगी विताउन सकिन्छ की भनेर अन्जान मान्छेसँग सहारा मागेकी थिई । तर, युवकको गन्तव्य अर्कैतिर थियो । बसबाट अ‍ोर्लेर युवक “फेरि भेटौला” आफ्नो गन्तव्य तिर लाग्छ ।
कमला सोचमग्न हुन्छे, पछुताउँछे केहीक्षणअघिसम्म युवसँग गरेको कुराले । “आखिर मलाइ यो के हुँदैछ ?, म कुन सोचाइमा छु अहिले ?, सपनामा छु की विपनामा ?” कमला आफैलाई पागल ठान्छे ।
दिनदिनैको घरायसी झगडाले मन ठिक ठाउँमा हुँदैन कमलाको । हरेक रहर र चाहनालाई आँसुसँग पिएर बाँचेकी कमला, बसभित्रै आत्मग्लानि गर्छे यहि भन्दै “आखिर त्यो क्षणिकको युवकसँग मैले जीवनको सहारा कसरी माग्न पुगे, के भयो मलाई ?”
कथा : समानान्तर
छेउको गाउँमा तीन चार जना एस एल सी ( दशौं…
लघुकथाः पवित्र माया
दिउँसोको समयमा म घुम्दै एक ठाउँमा पुगेको थिएँ । मेरो…
लघुकथा – शान्तिको खोजी
लघुकथाः घट्दो इच्छाहरु
लघुकथाः बच्चादानी हराकी आइमाइ
लघुकथाः दाल गल्दैन
हाँसीखुसी विवाह मण्डपबाट विदा गरेकी छोरीले जब दुलाहाको घर नपुग्दै आत्महत्याको बाटो रोजिन् ४ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़
२ असार, काठमाण्डौं । हाँसी खुसी विवाहको मण्डपबाट विदा भएकी…
आज १४६२ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किए, निको हुनेको संख्या ४६५६ पुग्यो २ हप्ता पहिले | संसार न्यूज़
१७ असार, काठमाण्डौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १,४६२ जना…
सक्कली अयोध्या नेपालमै छ, यी हुन् अयोध्या नेपालमै भएका प्रमाण २ दिन पहिले | लोकमणि पौडेल
सत्यलाई दबाउने उद्देश्यले जब भ्रमको खेती गरिन्छ र हजारौं पटक…
१ महिनामा पूनर्बीमाको सम्पत्ती ५ गुणाले बढ्यो ३ दिन पहिले | संसार न्यूज़
२८ असार, काठमाडौं । नेप्सेमा सूचीकरण भएको १ महिनामा नेपाल…
Preeti to Unicode & Unicode to Preeti
सम्पादक/सञ्चालक: मीना तिवारी(घिमिरे)
कार्यकारी सम्पादक: पुष्पलाल पाण्डे
सह–सम्पादक: राजेन्द्र बराल
राष्ट्रिय प्रतिनिधि/संवाददाता: विरबहादुर दर्नाल (पूर्वाञ्चल संयोजक) , कमला तिवारी (बुटबल), ज्ञानेन्द्र ठाकुर (जनकपुर), अमित अग्रवाल (वीरगञ्ज), अनिल वाग्ले (झापा)
प्रेम पोमु (जर्मनी), प्रेम ब. परियार (नर्वे) , सुवास मल्ल (साइप्रस) , शालिकराम आचार्य (ओमान) , श्रीयावा लिम्बू(साउदी) , ओम अधिकारी(आयरल्याण्ड) ,ओम थापा काउचा(युके) , अमेरिका–सोमनाथ घिमिरे , अष्ट्रेलिया – शिव बञ्जरा ,मलेसिया–मोहन ताजपुरिया ,स्पेन–डिबी गुरुङ ,आयरल्यान्ड–अंकित ओली , लेबनान–चन्द्रकला श्रेष्ठ , पोल्याण्ड–मित्रलाल पार्दे , फिनल्याण्ड– जगन्नाथ काफ्ले , केन्या– महेन्द्र चापागाईं , क्यानडा –मिठु कोइराला , मालदिभ्स – राजन पराजुली ,मकाउ – प्रजुनकुमार अधिकारी , अफगानिस्तान – बालकुमार क्षेत्री , युगाण्डा – रमेश कंडेल , ईश्वरी बस्याल, उद्धव मगर(कतार)
फ्याक्सः ००९७७–१–४४३३०६६ पोष्ट बक्स नं. ९०५१ काठमाडौ